Clone an'ny Apple Watch fa amin'ny analog, ny Swiss Alp Watch | Avy amin'ny mac aho
Clone an'ny Apple Watch fa amin'ny analog, ny Swiss Alp Watch
Tsy ho nieritreritra velively izahay fa ny indostrian'ny famantaranandro Soisa dia handinika ny fandikana ny famolavolana Apple Watch avy amin'ny an'ny Cupertino, saingy. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao hoe inona ny singa iray ao amin'ny Swiss Alp Watch, famantaranandro misy ny mitovy endrika amin'ny Apple Watch fa miaraka am-po analog.
Izy io dia kinova amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny vatana, mitovy amin'ny toerana misy azy, ny fametrahana ny satroboninahitra nomerika eo afovoan'ny iray amin'ireo sisiny fa tsy eo an-tampon'ny iray sisiny amin'ny tranga Apple Watch tany am-boalohany.
Ity famataranandro ity dia tsy manome ny mety hisian'ny fifanakalozana tady fa ny famaranana ny vatana azy io dia mahatonga antsika hieritreritra amin'ny fomba tsy voatsabo momba ny sarobidy Apple Watch. Raha ny milina misy azy dia manana ny milina soisa rehetra izy izay mahatonga azy io hiasa ho toy ny hatsarana.
Ny vatany dia misy kristaly roa, ny iray eo an-tampony, izay misy ilay fiambenana, ary ny ampahany aoriana koa amin'ny vera izay maneho ny milina anatiny. Azonao atao ny mahita ny fomba samihafa mifangaro amin'ny rafi-mekanika anatiny hamelona ity modely famantaranandro ity.
Efa namidy ny famataranandro Orinasa Hodinkee amin'ny vidiny somary avo kokoa noho ny an'ny Apple Watch Sport. Amin'ity tranga ity dia singa dimam-polo ihany no novolavolaina miaraka amin'ny diagonal manakaiky ny 38mm sy namboarina tamin'ny volamena fotsy manamboatra ny vidiny eo amin'ny $ 24.900 XNUMX.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Clone an'ny Apple Watch fa amin'ny analog, ny Swiss Alp Watch
Tsy hividy ny Apple Watch aho
Ahoana ny fomba hibaikoana lahatsoratra amin'ny iPhone na iPad anao
Akaiky ny Loopie Milanese in Space Gray ho an'ny Apple Watch